Phoe Htut သည် ဇွန် 19, 2012 က 12:10amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
သတ္တ၀ါ အပေါင်း ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ
Nyi Nyi Naing သည် မေ 16, 2012 က 12:37amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
May you all,be happy and secure!
phyuthi သည် မေ 16, 2012 က 12:00amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
သတ္တ၀ါ အားလုံး တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးမေတ္တာထားနိုင်ကြပါစေ၊
wai mon သည် မေ 7, 2012 က 2:35pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
သုံးဆယ့်တစ်ဘုံ၌ကျင်လည်ကြကုန်သော လူ၊နတ်၊ဗြဟ္မာ သတ္တဝါအပေါင်း၊
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ချမ်းသာစွာဖြင့် မိမိခန္ဓာဝန်ကို ရွက်ဆောင်နိုင်ပါစေ.......။
Nyi Nyi Naing သည် မေ 5, 2012 က 11:29pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
ဗုဒ္ဓနေ. မှာ အားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖျာ ကျန်းမာချမ်းသာနိုင်ကြပါစေ ။
နန်းယု သည် ဖေဖော်ဝါရီ 4, 2012 က 12:36pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
Moe သည် ဇန်န၀ါရီ 22, 2012 က 10:26amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
သက်ရှိ သက်မဲ့ သတ္တ၀ါများအားလုံး
melan သည် ဇန်န၀ါရီ 22, 2012 က 1:36amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
၁။ အရှေ့အရပ်မှာ သတ္တ၀ါ ချမ်းသာကိုယ်စိတ် မြဲပါစေ။
၂။ အရှေ့တောင်ထောင့်အရပ်မှာ သတ္တ၀ါ ချမ်းသာကိုယ်စိတ် မြဲပါစေ။
၃။ တောင်အရပ်မှာ သတ္တ၀ါ ချမ်းသာကိုယ်စိတ် မြဲပါစေ။
၄။ အနောက်တောင်ထောင့်အရပ်မှာ သတ္တ၀ါ ချမ်းသာကိုယ်စိတ် မြဲပါစေ။
၅။ အနောက်အရပ်မှာ သတ္တ၀ါ ချမ်းသာကိုယ်စိတ် မြဲပါစေ။
၆။ အနောက်မြောက်ထောင့်အရပ်မှာ သတ္တ၀ါ ချမ်းသာကိုယ်စိတ် မြဲပါစေ။
၇။ မြောက်အရပ်မှာ သတ္တ၀ါ ချမ်းသာကိုယ်စိတ် မြဲပါစေ။
၈။ အရှေ့မြောက်ထောင့်အရပ်မှာ သတ္တ၀ါ ချမ်းသာကိုယ်စိတ် မြဲပါစေ။
၉။ အထက်အရပ်မှာ သတ္တ၀ါ ချမ်းသာကိုယ်စိတ် မြဲပါစေ။
၁၀။အောက်အရပ်မှာ သတ္တ၀ါ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်ဲမြဲပါစေ။
နန်းယု သည် ဇန်န၀ါရီ 17, 2012 က 1:16pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
လူနတ်ဗြဟ္မာသတ္တ၀ါအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာစွာနဲ့ နိဗ္ဗာန် ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းတရားမြတ်တွေကို နာနိုင် ကြားနိုင် ကျင့်နိုင်ကြပြိး နိဗ္ဗာန်သို့လျှင်မြန်စွာ မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ.....